SEDUM GUDUUD: WAXA GURYAHA DAWOOYINKA AY LEEYIHIIN WARSHAD - SOOSAARKA DALAGGA
Warshad badani leh caleemo fareem ah iyo inflorescences purple, waxay leedahay magacyo badan (kaabajka bunni, jeexan, dharbaaxo)oo caan ku ah sifooyinka bogsashada. Caleenta dhirta waxaa ku jira 600 oo nooc, kuwaas oo ah jiilaalka-adag iyo kulaylaha kulaylaha, kulaylka iyo go'doomin. Tixgeli waxyaabaha muhiimka ah iyo isticmaalka stonecrop.
Waxyaabaha kiimikada ee warshadda
Dhammaan noocyada stonecrop waa daaweyn waxayna leeyihiin qiyaaso isku mid ah kiimikada:
Alkaloids - Waxay leeyihiin saameyn ku-dhiiglayn, dhiig-yari, waxay caawiyaan inay dejiyaan nidaamka dareemayaasha iyo cadaadiska dhiigga.
Tannins - ay leeyihiin anti-barar, antimicrobial, saameyn soo cusbooneysiin, caadiyan habka caloosha iyo mindhicirka.
Glycosides - Hayso wax qabadsiin ah, duriinka, daawada bakteeriyada iyo antimicrobial, waxay kor u qaadaan dheecaanka xaakimka iyo dheecaanka.
Ascorbic acid - waxay caadi u tahay shaqada qanjirada endocrine, nidaamka dareenka dhexe, shaqada samaynta dhiigga, waxay xoojisaa nidaamka difaaca, waxay kor u qaadaysaa sunta iyo in la nuugo birta jirka.
Asaasiga noolaha - Wuxuu kiciyaa habka hematopoietic, geeddi-socodka dheef-shiid kiimikaad iyo soosaarka insulin, oo saameyn ku yeelanaya habka dhexe ee neerfaha. Waxay hagaajinayaan hawsha mareenka caloosha, caloosha jirka ee birta, potassium iyo magnesium, xaalada xididdada dhiigga, hawlaha taranka, iyo difaaca jirka. Waxay yareeyaan kolestaroolka, dhexdhexaadinta iyo tirtiridda sunta.
Ash - wuxuu leeyahay saameynta anti-bararka, jeermiska jeermiska, wuxuu hoos u dhigaa xinjirta dhiigga iyo xayiraa xinjiro dhiig oo guduud ah.
Flavonoids - inaad yeelato saameyn dareen-celin ah, caadi ahaan shaqada wadnaha, qanjidhada adrenal, cadaadiska dhiigga.
Saponins - waxay leeyihiin dib u soo ceshadeyn, duri duri, saameyn ku dejin, kor u qaadista dheecaanka xaako, ka hortagga qaabaynta jimicsiyada sclerotic.
Koontooyinka - ku yeeshaan saameyn niyadjabsan unugyada burooyinka.
Mucus - Waxay leeyihiin saamayn ka hortag ah oo daboolaya, taas oo ka dhalatay taas oo ay ka qayb qaadato sii-deynta xaako.
Sahara - Inuu jirka ku siiyo tamar.
Wax - wuxuu leeyahay haqab-saarid bakteeriyadeed, wuxuu keenaa habka dib-u-cusboonaynta.
Qalabka Faragelinta ee muraayadda stonecrop
Kaabash bunni ahSida laga soo xigtay natiijooyinka baaritaanka cilmi-baarista, waxaa ku yaal guryaha oo badan. Waxay dib u soo celisaa dhiig, dhaawaca nabarrada, waxay hagaajisaa shaqada wadnaha. Magenta Mooska Waa mid ka mid ah kiciyeyaasha ugu awoodda badan ee ka soo jeeda oo ka sii daraya diyaargarowga aloea ee dhaqdhaqaaqa noolaha.
Casiirka geedka ayaa baabi'inaya xadgudubka dheef-shiid kiimikaadka, taasoo keentay dhiig-bax. Waxay kor u qaadeysaa dib u soo nooleynta borotiinka dhiigga, kordhinta diirkooda ku jira serum. Sidoo kale, casiirku waxay kicisaa habka dhexe ee dareenka.
Waa muhiim! Si aad u qaado juice of stonecrop ee guduud ah foomka saafi, waxaa lagama maarmaan ah in ay qaataan 30 ml dhowr jeer maalintii.
Waxyaabaha laga soo saaro caleemaha ee sedumiyo guduud ah waa qayb ka mid ah diyaargarowga daaweynta ee kicinaysa hababka dheef-shiid kiimikaadka iyo kor u qaadista unugyada.
Aragtida Magenta: Guryaha waxtarka leh
Nidaamku wuxuu leeyahay sifooyin anti-bararka cudurada nidaamka urojiinka, wuxuu kiciyaa habka wadnaha iyo habdhiska dhexe ee dareenka, wuxuu gacan ka geystaa foosha iyo dhalmada suuxdinta, oo loo isticmaalo daaweynta kansarka, wuxuu leeyahay saameyn tufaax ah oo leh tamar-darro guud, xanuun dareemo iyo tabar darro.
Warshadda waxaa si weyn loogu isticmaalaa daaweynta pneumonia, bronchitis, cagaarshowga, sida bogsashada boogta. Qalliinka iyo daawada indhoolojiga ah waxay isticmaalaan hantida dib u soo kabashada ee stonecrop. Waxay xoojinaysaa bogsashada unugyada lafaha, waxaa loo isticmaalaa daaweynta dhaawacyada isbitaallada.
Iyada oo loo yaqaan 'otolaryngology', waxaa loo isticmaalaa sidii hanti-barar ah oo loogu talagalay cunaha iyo xanuunka stomatitis. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay duri, duri, xannuun, hemostatic, calool xanuun.
Ma taqaanaa? Sida laga soo xigtay halyeeyga, Ilya Muromets wuxuu fadhiyay cunto kariyaha ilaa 33 sano sababtoo ah xanuunkiisa lugaha. Goobta cawska ayaa ka caawisay inuu la qabsado cudurkiisa.
Sida loo isticmaalo lafaha stonecrop ee daawada dhaqameed
Sedum waxaa loo adeegsadaa daawada dadweynaha ee cunista, cuncun, poultices qaabka casiirka, decoctions, tinctures, boomaatada, budada. Sida loo isticmaalo decoction caleen antihelminthic, iyo geedo geedo cusub oo loo isticmaalo si loo daweeyo bukaanka iyo finanka.
Ochitkok dharbaaxo daaweynta kansarku waxay ka waxtar badan tahay xakamaynta. Marka hore, ma laha walxo sun ah, iyo marka labaad, marar badan ayaa ka badan sifooyinka dhirta kale. Waxaa loo adeegsadaa sidii daaweyn waxtar leh oo ku saabsan cudurka kansarka.
Waxaad diyaarin kartaa faleebo antitumor ah sida ku qoran buuggan: 1 tbsp. Beerleeyda caleemaha la jajabiyey ee dhirta waxaa lagu soo dhejiyay 1 koob oo biyo ah karkarana waxaa loo oggol yahay in lagu dilo ilaa laba saacadood. Qaado afar jeer maalintii muddo 50-70 ml ah hal mar.
Geedaha Skripun waxaa loo isticmaalaa qaab tinctures ah, budo ah, laga soosaaray, cadar, casiir, kaas oo la diyaarin karaa sida ku cad cuntooyinka soo socda:
Tincture. 150 g oo caleemo jajab ah ee stonecrop, 0.5 litir oo vodka. Ku adkee ugu yaraan laba toddobaad. Qaado tincture kahor cuntooyinka 30 dhibcood 3 jeer maalintii. Wax ku ool ah xanuunka dareenka.
Budada. Caleemaha la qalajiyey waa dhul waxaana lagu kaydiyaa weel dhalada ah. Qaado saddex goor maalintii maalintii 1 tsp. Badanaa, budada waxaa loo qaataa sidii tiktar.
Faleebo. 1h l 300 ml oo biyo ah karkaraya ayaa lagu shubay walxaha la jajabiyey. Xalka daaweynta qiyaastii afar saacadood. Ogolow kadib markaad wax cuneyso 0.5 miro 3 jeer maalintii. Waxaa loo adeegsadaa oof-wareen, cudur kalyaha, suuxdin, iyo sidoo kale wakiil dibadda ah ee daaweynta nabarradaha nadiifka ah.
Saaro Laga soo bilaabo caleemaha geedka waxaa la diyaariyey faleebo oo ah 1:10 isticmaalka gudaha ama 1: 5 isticmaalka banaanka. Wixii saxda ah ee wax lagu kariyo oo leh faleebo qabow 15-20 daqiiqo biyo dhar. Marka xigta, waxaa la sifeeyaa oo uumiga u ah miisaan u dhigma badhkii asalka ahaa. Qaado soo saaraha 15-20 dhibcood 3-4 jeer maalintii. Waa biostimulator firfircoon.
Saliid. Isticmaal cabitaan caws cusub. Waxaa lagu qasan yahay subagga la dhalaaliyay 1: 1. Bariisku waxa uu si gooni ah u codsanayaa boogo, finan yaryar, nabarrado nadiif ah.
Casiirka Caleemaha cusub ee dhirta ayaa la dhaqaa, lagu daaweeyaa biyo karkaraya iyo duqoobey. Laga soo bilaabo mass ee keentay squeeze casiir leh faashad. Ku sifee juice biyo leh cabirka 1: 1 oo isku kari ilaa 2 daqiiqo. Qaado 1 qaado oo 3 jeer maalintii maalintii cuntada. Markaad dibedda ka codsato, maro qoyan oo casiir leh ayaa lagu daboolaa aagga dhaawacmay.
Isticmaalka stonecrop ee karinta
Sedum waa qiimo ma aha oo kaliya sida dhirta daawada iyo ornamental, laakiin sidoo kale sida dhirta malab-qaadista. Beekeepers waxay ku calaamadinayaan sidii dhir udifaaci kara nadiifka xitaa hawada kulul. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa nafaqada. Si arrintan loo sameeyo, isticmaal caleemaha iyo caleemaha yar yar ee geedka. Waxay leeyihiin dhadhan wanaagsan oo dhan. In lagu kariyo, dhirta waxaa lagu daraa saladh iyo maraqa, iyo xilliga qaboobaha waxaa la cusbayn oo la gooyey.
Ma taqaanaa? Waqtiga Charlemagne waxaa jiray amar - in lagu beero stonecrop on saqafka guryaha. Waxaa la rumaysan yahay in uu guriga ka badbaadin doono weerarka iftiinka.
Sedum guduud: sida loo soo iibsado alaabta ceeriin caafimaad
Waa in la xusuusnaado in stonecrop ay leedahay awoodda daweynta ugu weyn inta lagu jiro ubax, sidaa daraadeed waxa fiican in la diyaariyo alaabta ceeriin muddadaas. Waxaa lagama maarmaan ah in la soo ururiyo cawska cimilada qalalan, jarida caleemaha yar yar iyadoo la adeegsanayo maqas. Harvest sidoo kale xididdada geedka. Goynta xididada waxaa la sameeyaa dayrta. Waxaa laga nadiifiyey dhulka, maydhay, la jaray, qallajiyey qorraxda oo la qalajiyey qol hawo leh. Roots waxay ku hayaan guryaha bogsoon saddex sano.
Iyada oo ujeedada daaweynta sidoo kale u isticmaal ubaxyada geedka, laakiin aad u yar. Waxay ka sameeyaan shaaha, kuwaas oo ay la cabaan wadnaha iyo calool xanuun, cudur beerka iyo cataract ee mareenka sare ee neefta. Sida daaweyn dibadeed, ubax waxaa loo isticmaalaa cambaar iyo qaaxada maqaarka ee carruurta.
Cawska ka mid ah kaabajka hare waxaa iska leh foomka succulent, taas oo ah, waxa uu leeyahay awood u leh inuu hayn qoyaan iyo wuxuu leeyahay caleemaha casiir iyo caleemaha. Si loo dedejiyo habka loo qalajiyo alaabta ceeriin, waxaa lagama maarmaan ah in lagu dhajiyo warshadda biyo karkaraya. Natiijo ahaan, unugyada nool ayaa la dilaa oo awood u leh inay hayso qoyaan la'aanta.
Si aad u qallajiso dhirta ayaa lagama maarmaan u ah qiiqa ama hoostiisa, laakiin ma jiro wax hoos ku xusan qorraxda tooska ah ee qorraxda. Cawska la qalajiyey wuxuu leeyahay ur aan fiicnayn oo haya awoodiisa daawada muddo laba sano ah.
Marka la isticmaalayo dhar adag oo loo isticmaalo daaweynta, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado in ay si toos ah ujirto. Of dhammaan noocyada sedum, kaliya sedum waa sun. Isticmaalka waa in si adag loo xakameeyo oo aan ka badnayn qiyaasta loo baahan yahay, maadaama ay tani keeni karto matag, dawakh iyo wadnacsi wadnaha. Isticmaalka caustic sedum ayaa ka horjoogsan carruurta, haweenka uurka leh, bukaansho-ba'an, dadka qaba jahwareerka dareenka oo kordhay.
Waa muhiim! Laguma talinayo in aad qaadato casiirka soodhada leh ee kansarka, iyo sidoo kale gastritis.
Haddii aad go'aansato inaad bilowdo daaweyn leh sedum dhagax, la tasho dhakhtarkaaga kaliya. Weli, daaweynta hoosta kormeerka takhasuska ayaa marwalba siinaya firfircooni badan waxayna ka caawineysaa in laga fogaado sii xumeynta cudurkan.